Faahfaahin noocee ah ayaa loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho marka la dhisayo nidaam hoolka filimka iyo telefishanka
Nidaam tayo sare leh oo filim iyo telefishan oo hoolka telefishanka ah ma aha oo keliya natiijada ka dhalanaysa saamaynta isku dhafan ee qalabka maqalka iyo muuqaalka ah, laakiin sidoo kale wuxuu si dhow ula xiriirayaa naqshadeynta qurxintaada. Haddii faahfaahinta naqshadeynta qurxintaadu si habboon loo maareeyo, waxay kor u qaadi doontaa saameynta qolka maqalka-muuqaalka gurigaaga oo buuxa ...
Miyaad taabatay waxyaabaha mamnuuca ka ah isticmaalka codka ee hoolka filimka iyo telefishanka?
Iyada oo caan ku ah qalabka maqalka ee hoolalka filimada iyo telefishanka iyo kororka dadka isticmaala filimada iyo hoolalka telefishanka, qalab badan oo heer sare ah ayaa si guul leh u galay nolosha dadka isticmaala filimada iyo hoolalka telefishanka. Audio, oo ah qalabka ugu muhiimsan, waa qayb aan lagama maarmaan u ahayn filimka iyo tel ...
Dhibaatooyinka yaryar ee ugu caansan ee soo food saaray dhismaha nidaam maqal iyo muuqaal ah
TV-ga qolka fadhiga wali ma loo baahan yahay? Xilligii Internet-ka mobilada, xitaa waaliddiintu waxay bilaabeen inay ku jiifsadaan fadhiga sariirta oo ay ku daawadaan cajalado iyo warar ku saabsan taleefannadooda gacanta, TV-ga ayaa dansanaa muddo dheer. Qolka fadhiga sidoo kale ma shaqeyn karo Waa lagama maarmaan in Joule uu daawado noocyo kala duwan ...
Maxaan sameeyaa haddii nidaamka maqalka-muuqaalka guriga kaliya uu dhuuqo codka laakiin uusan aheyn mid dhawaq leh?
Nidaamka maqalka-muuqaalka guriga: guud ahaan fiiro gaar ah u yeelo shanta qodob ee soosocda dahaarka codka iyo nuugista codka. 1. Dhawaaqa nidaamka maqal-maqalka waxaa lagu ogaan karaa siyaabo badan: Marka hore, xulashada macquulka ah ee qalabka codka dhuuqaya. Laakiin sidoo kale fiiro gaar ah u yeelo qalabka dhawaaqa soo jiidanaya ...
Sidee loo doortaa kordhiyaha awoodda nidaamka maqalka iyo muuqaalka?
Nidaam maqal iyo muuqaal oo dhameystiran waxaa ka mid ah wareegyo iyo qalab caawiyayaal badan, sida maqalka, isha isha, kororka korontada, qalabka CD-ga, iwm , laga bilaabo awoodda a ...
Sida loo hagaajiyo tayada codka loo maqli karo masraxa filinkaaga
Sida aan wada ogsoonahay, deegaanka austic ee filimka iyo hoolka telefishanka ayaa saameyn aad u weyn ku leh dib u soo celinta saamaynta nidaamka maqalka marka loo eego qalabka kale ee maqalka. In kasta oo ay jiraan siyaabo badan oo lagu hagaajin karo jawiga dhawaaqa, mishiinka badan ee filimka iyo istudiyaha ayaa ...
Nidaamka maqalka Sida loo doorto
Hagaaji tayada codka loo maqli karo
Sida aan wada ogsoonahay, deegaanka austicic ee filimka iyo hoolka telefishanka ayaa saameyn aad uga weyn ku leh saameynta nidaamka codka marka loo eego qalabka kale ee maqalka. In kasta oo ay jiraan siyaabo badan oo lagu hagaajin karo jawiga dhawaaqa, mishiinka badan ee filimka iyo istudiyaha ayaa wax ka ...
Shaleemada qaaska ah miyay tahay in lagu dhejiyo gidaarka ama codka banaanka la dhigo?
Shaleemada gaarka loo leeyahay miyay habboon tahay inay gasho gidaarka ama istuudiyo dibedda dhigto? Waxani wuxuu umuuqdaa mid aad ufudud. —— Ama si toos ah banaanka u dhig sida Hi-Fi oo dhaqameed ah, ama si toos ah gidaarka u dhig, la dhexgal darbiga, ama xitaa toos toos ugu dhig shaashadda gadaashiisa shaashadda maqalka. Runtii ma ...
Wali qolka fadhiga TV ma loo baahan yahay? Xilligii Internet-ka mobilada, xitaa waaliddiintu waxay bilaabeen inay ku jiifsadaan fadhiga sariirta oo ay ku daawadaan fiidiyowyada iyo wararka taleefannadooda, TV-ga waa la damiyey muddo dheer. Qolka fadhiga sidoo kale ma shaqeyn karo Waa lagama maarmaan in mararka qaarkood la daawado bandhigyo kala duwan oo ah ...
Waxaa laga soo xigtey: Internet Add Time: 2020-11-05 Guji: Nidaam maqal iyo muuqaal oo dhameystiran waxaa ku jira wareegyo iyo qalab caawiyayaal badan, sida maqalka, isha isha, kororka korontada, CD player, iwm. Nidaamka codka ayaa mas'uul ka noqon doona soo bandhigida. ee saameynta nidaamka maqalka maqalka ee calaamadda sidaas ...
Ma loo baahan yahay in la isticmaalo qalabka daaweynta austic?
Marka xigta, waxaan ka wada hadli doonnaa daaweynta austicic ee qolka fiidiyowga caadada ah. Waqtigan xaadirka ah, naqshadaha qolka maqalka-muuqaalka ah ee guryaha iyo dibaddaba loogu talagalay qaab-u-habeyn gaar ah oo loo adeegsado daaweynta acoustic illaa heer ka weyn ama ka yar, inta badan oo ay ku jiraan nuugista codka iyo faafitaanka. Dabcan, xalalka ugu sareeya qaarkood sidoo kale waxay isticmaalaan acoust isku dhafan ...
Istaraatiijiyada qaabeynta masraxa gaarka loo leeyahay ee heer-gelitaan, waxaad u baahan tahay inaad wax yar ogaato
Marka 90-ka kadib ay ka tagaan Coke oo ay soo qaadaan heerkulka, markay 80-meeyadii u ooman yihiin xasiloonida oo ay ku maydhaan saaxiibka saaxiibka ah, waa inaad la taahaa sixirka waqtiga. Nolosha casriga ah ee qoyska, waa maxay waxyaabaha cusub ee soo jiitay dareenka qof walba? Taasi waa inay noqotaa midka cusub ee gaarka loo leeyahay ...
Runtii ma fiicantahay in shaneemo gaar loo leeyahay laga dhigo qeybta hoose?
1. Waxa ugu muhiimsan ee la tixgeliyaa waa daadashada dhulka hoostiisa. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad si taxaddar leh u hubisaa booska oo dhan si ay u daadsadaan. Guriyeyaasha cusub sida caadiga ah sifiican ayey u daadiyaan, laakiin guryaha dabaqyada hore ayaa u nugul daadashada. Biyaha daadanaya waxay si tartiib tartiib ah u baabi'in doonaan darbiyada waxayna dhaawici doonaan qalabka. Tani waa ...
Iskuxirka nidaamka shineemooyinka ugu sareeya
Muxuu ka kooban yahay shaneemooyinka gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay, sameynta nidaamka shineemooyinka ugu sareeya ee gaarka loo leeyahay iyo shineemooyinka ugu sareeya ee gaarka loo leeyahay, sida loo sameeyo kuwan, ha kuu soo bandhigo Zhongle Bianxiao. Waxyaabaha ka kooban nidaamka tiyaatarka ugu sareeya ee gaarka loo leeyahay (waa maxay waxyaabaha ku jira tiyaatarka ugu sareeya ee gaarka loo leeyahay), halkan waxaa ...
Istaraatiijiyad wax ku ool ah oo lagu dhisayo tiyaatarka guriga
Markii dhaqaalaha bulshadu galo marxalad horumar deg deg ah, qoysas badan oo reer magaal ah ayaa diyaar u ah inay filimada ku daawadaan guryaha, taas oo ka hortagi karta saxmada taraafikada magaalada maalmaha fasaxa ah waxayna si xor ah ugu raaxeysan karaan filimka qoyska iyo carruurta. Sidaa darteed, dejinta filim iyo telefishanka h ...
Guri noocee ah ayaa ku habboon qurxinta iyo qaabeynta tiyaatarka guriga?
Dad badan oo ku waalan filimada iyo muusigga waxay rabaan inay ku rakibaan masrax gaar ah guriga si ay u dareemaan farxadda filimada iyo muusigga wakhti kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira su'aal kale oo qof walba dhibaysa, taasi waa, qol noocee ah ayaa ku habboon tiyaatar gaar loo leeyahay. In kastoo dad badani ...
Naqshadeynta qurxinta tiyaatarka gaarka loo leeyahay, qaabkee ayaa saxankaaga ah
Maalmahan, rakibaadda tiyaatarada gaarka loo leeyahay waxay noqotay isbeddel, inbadan oo xiiso leh maqalka iyo muuqaalka guryaha ayaa bilaabaya inay fiiro gaar ah u yeeshaan, iyagoo rajeynaya inay dhisaan tiyaatar gaar loo leeyahay oo run ahaantii la jaan qaadi kara qaabka qurxinta gurigooda. Sababtoo ah heerarka bilicsanaanta qof walba a ...
Dhowr ismaandhaaf ah oo ku saabsan Daaweynta Acoustic ee Tiyaatarka Guryaha Gaarka loo leeyahay
Hadda uma baahnin inaan tagno tiyaatarada waaweyn ee ganacsiga si aan u daawano filimada, maxaa yeelay qaabeynta, rakibidda, iyo dhisidda tiyaatarada gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay waxay noqdeen xulashada milkiilayaasha badankood. Deegaanka raaxada leh ee daawashada guriga iyo saameynta naxdinta leh ee maqalka iyo muuqaalka leh ayaa leh b ...
Maxay yihiin tilmaamaha lagu iibsado mashruuc
Ugu horreyntii, cabbirka booska Xulashada mishiinka jeexjeexa waa inuu ku xirnaadaa cabbirka booska. Haddii lagu rakibo qolka fadhiga, qolka fadhiga waa inuu ahaadaa mid waasac ah. Guud ahaan, aagga qolka fadhiga waa inuu ka badnaadaa 20 mitir laba jibbaaran, haddii kale, haddii boosku aad u yar yahay, ha ...
Sidee loo xukumaa nidaamka dhawaaqa tiyaatarka guriga?
Waxaa laga soo xigtey: Internet Add Time: 2020-11-10 Guji: Waxaa suuqa ku jira noocyo badan oo maqal shaneemo oo gaar loo leeyahay, ganacsi walbana wuxuu aaminsan yahay in tooda ay tahay tan ugu fiican. Mulkiile doonaya inuu dhiso shaneemo gaar loo leeyahay, oo ay soo food saareen noocyo badan, way adag tahay in la sheego waxa loo baahan yahay. Waqtigaan, waa mid aad ...
Sidee loola jaan qaadayaa ku hadlayaasha iyo codbaahiyaha nidaamka shineemooyinka gaarka loo leeyahay?
Kuwa ka shaqeeya waxay ogyihiin in saameynta nidaamka shineemo ee gaarka loo leeyahay ay tahay natiijada waxqabadka wadajirka ah ee qalabka. Sidaa darteed, dadka xiisaha u leh shineemooyinka gaarka ah waxay il gaar ah ku hayn doonaan isku dhafka qalabka markii la aasaasayo shineemo gaar ah. Si kastaba ha noqotee, tiyaatar gaar loo leeyahay maaha inuu iibsado s ...
Sidee loo hagaajiyaa jawiga daawashada ee nidaamka tiyaatarka guriga?
Markii aan kalsooni ku qabno inaan u sameysano qol qol jiifa nidaam tiyaatarka gaarka loo leeyahay qoyskeena, jawiga qolka qasan ee qasan iyo farabadan qalabka maqalka ee qolka fadhiga oo laga soo iibsaday khasnad ayaa kaa dhigay inaad awoodi kari weydo inaad bilowdo, waxaadna bilaabaysaa inaad la halgamto waxa samee? Bian Xiao ayaa kuu sheegay ...
Maxaa loo doortaa mashiinka HD Karaoke VOD? Calaamadee fiican
Iyadoo la adeegsanayo baahinta guud ee shabakada iyo teknolojiyada dhijitaalka ah, waxyaabo badan oo qeexan oo heer sare ah oo alaab elektaroonik ah, sida mashiinnada karaoke karaoke ee qeexitaanka sare, TV-ga dhijitaalka ah ee qeexan, iyo dijital sare ee qeexitaanka sare, ayaa ka soo muuqday nolosha. Tayada sawirka qeexan-sare iyo codka qu ...
Xulashada mashiinka karaoke karaoke
Mashiinka karaoke karaoke waa mashiin caan ah oo karaoke ah gudaha Shiinaha. Waxaa loo qaybiyaa laba nooc: nooc kaligiis taagan iyo nooca internetka. Nooca kaligiis taagan wuxuu ku habboon yahay qolalka shirarka ee unugyada qoyska iyo meelo kale, nooca shabakadduna wuxuu ku habboon yahay isticmaalka ballaaran ee KTV. Badiyaa soo bandhig ...
Cayaaryahan Karaoke Xirfad Leh - Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Barato Karaoke
Si aad u noqotid ciyaartoy karaoke xirfadle ah, waxaad u baahan doontaa inaad hesho makarafoon, go'yaal muusiko ah, buug ku saabsan muusigga iyo ereyada, oo ugu muhiimsan dhammaantood, waxaad u baahan tahay mashiin karaoke ah. Mashiinnada Karaoke si fudud ayaa looga heli karaa iibsashada dukaamada karaoke badankood. Waad dooran kartaa inaad midkood ...
Aqoon yar oo ku saabsan kala soocida hadalka
Waxyaabaha nolosha daruuriga u ah, gawaarida ayaa galay kumanaan qoys oo ku nool Texas. Maaddaama ay yihiin "dhegaha" baabuurta, maqalka gaariga ayaa ah xulashada koowaad ee kuwa xiiseeya wax ka beddelka badan. Wax ka beddel macquul ah ee maqalka gaariga ma hagaajin doono oo kaliya tayada codka gaarigaaga, laakiin sidoo kale wuxuu wanaajin doonaa wadistaada. Waxaan ...
Qoondaynta dadka ku hadla
Sameecadaha sameecadaha waxaa badanaa loo yaqaanaa geeso. Si fudud haddii loo dhigo, waa aaladaha elektaroonigga ah ee u rogi kara calaamadaha korantada dhawaq. Waxay yihiin qalab muhiim u ah nidaamyada maqalka. Sida mid ka mid ah qalabka wax lagu beddelo ee tamarta korantada u beddela tamarta codka, tayada iyo shaax ...
Noocyada mashiinka karaoke
Si gaar ah loogu meeleeyay isticmaalka qoyska, mashiinada karaoke-ka badankood ee suuqa yaala ayaa loo sameeyay goobaha KTV, iyagoo tixgalin waayay baahida xubnaha qoyska. Run ahaantii ku habboon isticmaalka qoyska: fududahay in la qaado, maktabadda heesaha oo dhameystiran, sida ugu macquulsan ee lagu daboolayo baahida isticmaalayaasha, cabirku waa ku habboon yahay ...
Mashiinka Karaoke Qoyska
Mashiinnada karaoke qoysaska waxaa badanaa loo yaqaan mashiinnada karaoke karaoke. Mashiinnada karaoke ee ugu horreeya waa cajalado duub ah, oo keliya leh cod laakiin aan lahayn sawirro. Ka dib markii cajaladaha fiidiyowga uu soo baxay 1970-yadii, karaoke waxaa loo casriyeeyay sawirrada iyo qoraallada, waxaana sawirro iyo ereyo lagu soo bandhigay ...
Ku raaxayso Karaoke adoo ku heesaya Mashiinka Karaoke
Iibsashada nidaamka karaoke waxay noqon kartaa maalgashi weyn, laakiin haddii aad si taxaddar leh u fiirsato, waxaad arki doontaa inay jiraan waxyaabo badan oo faa'iido leh oo la haysto.karaoke system ktv Waxaad helaysaa faa'iidada inaad haysatid kuwa ku hadla karaoke kuu gaar ah, waadna isticmaali kartaa iyaga gurigaaga. Waxba kama fiicna tan. Wh ...
Dhammaan wixii ku saabsan Nidaamka Karaoke
Haddii aad isku dayday inaad hesho hab aad ugu raaxeysato muusikada iyo u heesista isla waqtigaas, waxaad xiiseyn doontaa inaad barato sida loo isticmaalo karaoke system.karaoke system ktv Karaoke waa hab aad u fiican oo lagu barto inaad si wax ku ool ah u hadasho oo aad naftaada u muujiso kuwa kale. Markaad ku heesaysid mashiin karaoke ah, ...
Nidaamyada Hadalka ee Awoodda leh - Tilmaam kooban oo ku saabsan helitaanka Saxayaasha Hadalka DJ
Dad badan ayaa adeegsada erayga "Ku hadla afhayeenka DJ" si uu u sharaxo sameecado kasta oo loogu talagalay inay muusig cod dheer ka soo saarto dad fara badan oo cod weyn ku leh goob fagaare ah. naadiga qoob-ka-ciyaarka aan rasmiga ahayn dhammaantood waa tusaaleyaal ...
Waa Maxay Ciyaaryahan Karaoke ah?
Ciyaaryahan KTV Karaoke waa aalad fiican oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya inuu dhageysto muusigga uu jecel yahay ama xitaa uu galo heesaha iyo bandhigga adduunka ee karaoke.ktv karaoke Ciyaaryahanno badan oo dad ah ayaa jecel karaoke iyo baashaalka la socda. Haddii aad ka mid tahay dadkaas oo aad rabto inaad qaadato heesahaaga oo aad ...
Farqiga u dhexeeya taabashada mashiinka dhammaan-hal-hal iyo kombiyuutarka caadiga ah
Marka hore, muuqaalka Kombuyuutarrada caadiga ah, oo ay ku jiraan kombiyuutarada desktop iyo buugaagta xusuusta, cabirka ugu badan waa 14.5 illaa 22 inji; halka shaashadda taabashada mashiinka oo dhan-in-loo qaybin karo moodooyin badan, mishiinka oo dhan-in-mid ah waxaa lagu sudhay derbiga oo si toos ah dhulka la dhigay, si ...
Muuqaal warshadeed kee baa fiican?
Xulashada bandhigyada warshadaha ma ahan kuwa ka qaalisan kan fiican, laakiin waa inaad ku doorataa badeecooyinkaaga sida waafaqsan baahidaada oo ay kuu siiso khibrada ugu habboon. Kuwa soo socda ayaa sharraxaya sida loo doorto muuqaalka ugu habboon ee warshadaha iyadoo laga eegayo nolosha iftiinka dambe, qabow ...
Waxa Looga Raadinayo Mashiinka Karaoke
Ma maqashay wax nidaamyo Karaoke KTV ah? Kani waa wax fudud in lagu daro dhammaan qeybaha madadaalada ee loogu talagalay madadaalada guriga. Mashiinka Karaoke Mashiinka karaoke Sida ugu fudud ee ereyada, a Karaoke KTV waa TV set oo loo habeeyay inuu u dhaqmo sidii mashiin Karaoke ah. Sida laga yaabaa ...
Baro Sida Loo Heeso Karaoke - Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Fiirsato
Sharaxaad: Codsi muusig khadka tooska ah oo Mareykan ah ayaa markii ugu horreysay lagu bilaabay magaca Karaoke sanadii 2021 ka dibna waxaa lagu bilaabay aaladaha IOS ee 2021. iyadoo la adeegsanayo karaoke Barnaamijku wuxuu marki hore diiradda saaray barashada hababka heesaha ee Jabaananka sida farsamooyinka neefsashada, codka codka, dhawaaqa, qaamuusyada iyo codka In l ...
Muusiga Karaoke wuxuu ka kooban yahay laxanka oo loogu talagalay heesaha ay dhagaystayaasha dhageystaan. Muusikada Karaoke way ka duwan tahay noocyada kale ee muusikada maxaa yeelay waxaa badanaa loo heesaa inta ay ciyaarayso. Tani waxay siinaysaa karaoke taabasho dheeri ah oo isdaba joog ah, taas oo ka dhigaysa xitaa xiiso badan in la dhagaysto. nidaamyada karaoke halka ...
Doorashada Nidaamka Makarafoonka Cordless
Nidaamyada 'Cordless Microphone Systems' waxay caan ku yihiin fannaaniinta iyo kuwa kale ee jecel muusikada. Mar dambe looma baahna in laga walwalo fiilooyinka isku xiraya qaybo kala duwan oo qalab ah mar dambe, ama ka walwalka headset-ka aan is-waafaqi karin ama dhegaha. Nidaamka makarafoonka aan xadhiga lahayn waa nooc ...
Waxyaabaha La Tixgeliyo Marka La Iibsanayo Mikrofoonka Nidaamka Karaoke
Haddii aad suuqa ugu jirto nidaamka cusub ee karaoke-ka, waxaad u baahan doontaa inaad fiiriso xulashooyinka jira ee makarafoon sidoo kale.karakke system makarafoonka Tayada codkaagu waa muhiim marka aad heesaysid waana muhiim inaad haysato qalab sax ah si aad ugu heesi karto s ...
Faa'iidooyinka Mashiinka Karaoke La qaadan karo
Haddii aad isticmaali doontid mashiin karaoke oo la qaadan karo, waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad heesaha u qaaddo heerka ku xiga. Waad ogtahay sida dhibsashada leh marka qof uu ka badbadiyo ama isku dayo inuu noqdo mid qosol badan ama ka sii muhiimsan, marka uusan haba yaraatee heesin. Mashiinnada karaoke ee la qaadan karo ayaa kuu oggolaanaya inaad u heesato sidaad u ...
Sidee loo iibsadaa makarafoon wireless ah? Maxay yihiin siyaabaha loo iibsado makarafoon wireless ah
Makarafoonada lagu iibiyo suuqa ayaa badanaa loo qaybiyaa laba qaybood sida ku xusan madaxa qaadayaasha: mid waa makarafoon firfircoon, kaas oo inta badan lagu garto tayada codka oo wanaagsan oo aan u baahnayn koronto; kan kalena waa makarafoonka kondenser-ka, kaas oo lagu garto cimri dherer. Haye ...
Sida loogu rakibo makarafoonka qolka shirarka smart
Makarafoonka shirka ayaa umuuqda shaqsi fudud, laakiin maahan. Waa nidaam awood leh oo maqal iyo muuqaal leh oo ka kooban qalab kala duwan oo hodan ah. Kaliya markii nidaamka shirka loo qaabeeyo iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha ayaa nidaamka shirku ka faa'iideysan karaa horumarkiisa ...
Miyaan Iibsadaa Mashiin Karaoke Cusub?
Waxaa jira noocyo badan oo nidaamyada karaoke-ka guryaha ah ee suuqa.karaoke system system Qaarkood iyaga ka mid ah waa nidaamyo maqal oo fudud oo kuu oggolaanaya inaad ku heesato makarafoonka, ka dibna afhayeenku codkaaga ayuu dib ugu ciyaarayaa. Kuwa kale waxay ku dhameystiran yihiin kombuyuutar isku dhejinaya oo kuu ogolaanaya inaad ku ciyaarto raadadka maqalka ...
Helitaanka Mashiinka Karaoke oo Heeso Lagu Heeso
Haddii aad ka fekereyso inaad gurigaaga ka sameysato mashiin karaoke ah, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxyaabo kooban. Haddii aad rabto inaad awood u yeelatid inaad ku heesato heesaha aad ugu jeceshahay dadkuna ay kaa nusqaamaan, markaa waa inaad dhammaan u wada baxdaa. Ku hel mashiinka karaoke-ka ugu wanaagsan heesaha aad jeceshahay iyo kuwa ...
Waxaa la qiyaasayaa in laga bilaabo 2021 illaa 2026, suuqa ku hadla wirelesska adduunka uu ku kori doono isugeyn koror sanadle ah oo ka badan 14%. Suuqa adduunka ku hadla ee wireless-ka (oo lagu xisaabiyo dakhliga) wuxuu gaari doonaa koritaan buuxa oo ah 150% inta lagu jiro muddada saadaasha. Inta lagu jiro mudada 2021-2026, socod ...
Hadalka taleefanka sameecada ee xalka biyuhu
Horumarinta taleefannada casriga ah, taleefannada gacanta ayaa nolosheena ku noqday lama huraan. Looma isticmaalo oo keliya qalab isgaarsiineed, laakiin sidoo kale madadaalo, lacag bixin, iyo vibrato. Waxay noo keeni kartaa sahlanaato. Si kastaba ha noqotee, haddii taleefanka gacantu uusan lahayn shaqada biyuhu ka shaqeeyaan, oo si kama 'ah ...
Doorka iyo faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka kordhiya awoodda codka
Isku-darka korontada maqalka isku dhafan waxaa loo gudbiyaa sidii guul la dejiyey. Shaqada kororka isku-darka isku-dhafan ayaa ah in la xoojiyo awoodda calaamadaha daciifka ah ee korantada ee ay soo diraan wareegga hore ee wareegga, lana soo saaro hawo badan oo ku filan oo lagu wadi karo af-hayeenka si loo dhammaystiro beddelka elektaroonigga ah.
Cod-weyneeyaha dhawaaqa waa aalad dib u qaabeyn ku samaysa codka maqalka la gelinayo ee ku saabsan curiyaha soo saara dhawaaqa. Muga calaamadda dib u dhiska iyo heerka awoodda waa inay ahaadaan kuwo run ku habboon, dhalanrog wax ku ool ah oo hooseeya. Heerka maqalka wuxuu kudhowaad yahay 20Hz ilaa 20000Hz, marka codbaahiyaha waa inuu lahaadaa mid wanaagsan ...
Hordhaca mashiinka Karaoke
Mashiinka karaoke wuxuu u qaybsan yahay: mashiin karaoke-gooni ah iyo mashiinka karaoke ee internetka. Ujeedada waxaa loo qaybiyaa: mashiinka karaoke ee ganacsiga, mashiinka karaoke 1. Dadka jecel muusikada, jecel inay heesaan, oo doonaya inay noqdaan heesaayaal caan ah: U guur KTV guriga, u hees sida ugu badan ee aad rabto, oo noqo odaygaaga ...
Baaxadda suuqa ee warshadaha mashiinka karaoke ee 2021 waxay ku saleysan tahay tiro badan oo ah baaritaanka gacanta koowaad iyo kormeerka xogta ee daboolaya warshadaha waaweyn (oo ay ku jiraan wax soo saarka iyo qiimaha wax soo saarka ee bartilmaameedka wax soo saarka ama warshadaha waqti cayiman, iwm), oo ku saleysan dadka, baahiyaha dadka, ...
Hordhaca makarafoonka wireless
a. Qaabka loo yaqaan 'Qualtz LOCked': Waxay isticmaashaa oscillator quartz ah si loo soo saaro soo noqnoqosho sugan oo xasiloon oo loogu talagalay gudbinta iyo helitaanka. Wareegu waa sahlan yahay, kharashkuna waa hooseeyaa. Waa naqshada caadiga ah ee wareega makarafoonada wireless-ka maanta. Noocan makarafoonka iyo qalabka wax lagu qaato ayaa kaliya noqon kara ...
Qaybta soo noqnoqoshada makarafoonka
Immisa jeer ayaa farqiga u dhexeeya qaybta V-ga iyo U-se ee makarafoonka wireless-ka ah ee loo yaqaan 'U-segment' iyo 'V-segment' waxay u istcimaalaan mawjadaha gudbinta raadiyaha kaladuwan. Dhammaantood waa koox-kooxeedyo hiwaayadeed oo hiwaayad ah. Kooxda UHF waa koox soo noqnoqota oo aad u sarreysa oo leh xarunteedu tahay 145 MH ...
codsi kordhiyaha Bluetooth
1. Adabtarada kumbuyuutarrada kumbuyuutareedka ee 'Bluetooth amplifier adapter' oo leh is-dhexgallo kala duwan oo USB interface ah: nooca disk-ka nooca diskiga ah, Nooca Key Key, nooca isku laaban, sanduuqa. Waxaa loo adeegsaday kumbuyuutarrada Windows ee leh USB port iyo Macs oo leh Mac OS X. Tusaale ahaan, Sony's PCGA-BA1, yar iyo cute, culeyskiisu waa 5g oo kaliya, iftiinka tilmaanta ee dabada ayaa ifaya iftiin buluug ah ...
Hordhaca kordhiyaha Bluetooth
Kordhiye bluetooth waa nooc ka mid ah tikniyoolajiyada gudbinta shabakadda wireless. Waqtigaas, teknoolojiyada wireless-ka ayaa soo jirtay muddo dheer, qaarkoodna xitaa waxay galeen marxalad qaan gaar ah. Tusaale ahaan, tiknoolajiyada infrared waxaa laga heli karaa alaabada elektaroonigga ah ee macaamiisha kala duwan sida guriga a ...
Maalmahan, dad aad u tiro badan ayaa adeegsada ciyaartoy casri ah oo karaoke ah si ay uga yareeyaan culeyska shaqada iyo barashada nolosha. Dadka qaar waxay ku sugan yihiin KTV, laakiin dad badan ayaa jecel inay ku heesaan guriga, taas oo aan ku habbooneyn oo keliya laakiin sidoo kale la jaanqaadaysa rabitaanka dadka ee madadaalada saamaynta maqalka. Ciyaartoyda Karaoke ...
Qalabka Karaoke marka lagu daro kuwa ku hadla, qalabka muusikada aad ayuu muhiim u yahay, tayada cod-weynaha laftiisa sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Shaqada KTV waa in lagu daraa cabirka qolkaaga iyo qalabka qurxinta. Qeybaha kala duwan ee qolalka waa inay isticmaalaan koronto-dhaliyeyaal kala duwan. Feejignow ...
Waabkeena ku yaal Canton Fair iyo Hongkong Electronics Fair
Magaca karaoke wuxuu ka soo jeedaa ereyada Jabbaan "faaruq" iyo "orchestra". Waxay kuxirantahay macnaha guud, karaoke waxay noqon kartaa nooc ka mid ah madadaalada madadaalada, heesida gadaal gadaal, iyo aalad loogu talagalay soo celinta gadaal gadaal. Macno malahan macnaha guud, waxaan had iyo jeer sawirnaa makarafoon, iftiin dhalaalaya ...
Karaoke Mikrofoonka La qaadan karo, Microphone Karaoke Wireless ah, USB Cd Ciyaaryahan Baabuur, Nidaamka Codka Karaoke,